AHOANA NY FOMBA FANAKANANA NY DOKA YOUTUBE MANELINGELINA AMIN'NY TSINDRY TOKANA - MALEMY
YouTube no motera fikarohana lehibe indrindra faharoa misy mpampiasa mahatoky an-tapitrisany manerantany. Afaka mijery mivantana mivantana mivantana na atiny video hafa eo amin'ny lampihazo ianao. Misy zavatra ho an'ny rehetra ao amin'ny YouTube. Aleon'ireo mpampiasa mijery ny atiny ao amin'ny YouTube noho ny sehatra hafa satria loharanom-pialamboly lehibe io. Na izany aza, zavatra iray manelingelina ny YouTube dia ny doka mipoitra raha mijery horonan-tsary ianao. Fantatray fa noho ny fanampian'ireto doka ireto dia mahazo vola ny mpamorona YouTube, fa ny mahasosotra anay dia ny isan'ny doka tsy maintsy hitanay eo am-pijerena horonan-tsary. Noho izany, mba hamahana an'ity olana manelingelina ity ho an'ny rehetra, manana torolàlana momba ny ny fomba fanakanana ny doka YouTube azonao arahana mba hanesorana ireo doka tsy ilaina ao amin'ny YouTube.
Antony fanakanana ny doka YouTube
Fomba 4 hanakanana ny doka YouTube mahasosotra
Fomba 1: Raiso Premium YouTube
Fomba 2: Mampiasà Extension Chrome
Fomba 3: Ampiasao ny hack URL hanakanana doka
Fomba 4: Mampiasà tranokala ViewPure
Ny antony tokana itiavan'ny mpampiasa ny fanakanana ireo doka manelingelina ao amin'ny YouTube dia ny fahazoana traikefa mivantana amin'ny atiny tsara kokoa amin'ny sehatra tsy misy fanelingelenana. Ny faharetan'ireo doka ireo dia afaka 30 segondra ka hatramin'ny 3 minitra , izay mahasosotra anao rehefa mahazo doka marobe ao anaty horonan-tsary tokana.
Windows 10 fifandraisana Internet mitohy
Raha maniry ny hialana amin'ny doka YouTube mahasosotra ianao dia afaka mitady izany Famandrihana YouTube Premium . Miaraka amin'ny YouTube Premium, tsy hahazo doka ianao raha mijery horonan-tsary . Ankoatr'izay, azonao atao koa ny milalao ny lisitry ny lisitry ny YouTube na horonantsary hafa ao ambadika miaraka amin'ny premium YouTube.
Ankoatr'izay, hahazo traikefa malefaka kokoa ianao amin'ny fiasa marobe toa ny mozika YouTube sy kilalao premium. Azonao atao ihany koa ny misafidy nytoerana tenaLahatsary YouTube.
Ny drafitra famandrihana premium dia mora vidy ary manomboka amin'ny Rs129 / volana . Azonao atao ihany koa ny misafidy fitsarana maimaimpoana . Ho an'ny antsipirian'ny vidiny, azonao atao ny manindry Eto .
Misy fanitarana antoko fahatelo maromaro hita ao amin'ny chrome browser izay azonao ampiasaina amin'ny fanakanana ny doka amin'ny horonantsary YouTube. Iray amin'izany fanitarana izany Adblock ho an'ny YouTube azonao apetraka amin'ny tranokala Chrome.
1. Sokafy ny Browser Chrome ary mankany amin'ny Magazay tranokala Chrome .
Ny mpanampy fanavaozana ny windows 10 dia manohy misintona hatrany hatrany
2. Karazana Adblock ho an'ny YouTube ao amin'ny bara fikarohana ary kitiho ny fanitarana avy amin'ny valin'ny fikarohana.
3. Paompy Ampio amin'ny Chrome .
4. Tsindrio eo Manampia extension hametraka azy.
5. Rehefa avy nanampy soa ny fanitarana, azonao apetaka eo akaikin'ny kisary fanitarana ahafahanao miditra mora foana hanakanana ny doka ao amin'ny YouTube .
6. Ankehitriny, milalao ny horonantsary YouTube .
7. Farany, kitiho ny fanitarana avy amin'ny zoro ambony ankavanan'ny efijery fikandranao ary atodiho ny toggle ho an'ny fanakanana.
Dia izay; ity extension Chrome ity dia hanakana ny doka manelingelina ho anao, ary afaka mijery ireo horonan-tsary ianao nefa tsy misy fanelingelenana.
Vakio ihany koa: Ahoana no hahalalana raha nisy nanakana ny isao tamin'ny Android
Tetika fisedrana voazaha toetra mba hanakanana ny doka YouTube no fika URL. Ity fikafika ity dia misy fampidirana marika famantarana fe-potoana ao amin'ny adiresy URL amin'ilay horonantsary izay jerenao amin'ny YouTube. Ity dia hack hack manaitra izay azonao ampiasaina raha manontany tena ianao ny fomba fanakanana ny doka YouTube amin'ny fika URL tsotra. Raha hampiasa an'ity hack ity dia azonao atao ny manaraka ny fomba etsy ambany.
Matetika dia mitovy amin'ny adiresy URL ny zavatra hitanao ao amin'ny YouTube https://www.youtube.com/watch? […]
Ny sisa ataonao dia ny manampy fotoana ( . ) marika aorian'ny youtube.com.
Toy izao ny adiresy URL anao: https://www.youtube.com ./watch? […]
Rehefa manampy marika fe-potoana ao amin'ny adiresy URL amin'ilay horonantsary tianao hojerena ianao dia tsy hahazo doka manelingelina intsony rehefa mijery nyvideo. Na izany aza, amin'ny hack versi YouTube ihany no azonao ampiasaina. Raha te hampiasa ny hack URL amin'ny telefaona ianao, tsy maintsy avelanao hampiasa ny tranokala findainao amin'ny browser-nao . Raha te hampandeha ny tranokala birao, sokafy Google Chrome> tsindrio ny teboka telo mitsivalana eo amin'ny zorony ambony ankavanan'ny efijery> Safidio ny tranokala Desktop.
Fomba 4: Ampiasao ViewPure tranonkala
Safidy hafa azonao ampiasaina raha tsy fantatraony fomba fanakanana ny doka YouTube,dia amin'ny alàlan'ny fampiasana ny ViewPure tranonkala . Ity tranonkala ity dia mamela ny mpampiasa hijery mora foana ny horonantsary YouTube tsy misy fanelingelenana na doka eo anelanelany . Araho ireto dingana ireto hampiasana nyViewPuretranokala.
1. Sokafy ny browser-nao ary mankanesa ao amin'ny ViewPurSYtranonkala .
mihidy avy hatrany ny programa aorian'ny fisokafana
2. Misokatra YOUTUBE SY kopia ny URL amin'ilay horonan-tsary tianao ho jerena nefa tsy misy doka.
ny fomba fanaovana ddos ​​amin'ny fampiasana cmd
3. Ankehitriny, apetaho ny URL ny horonantsary YouTube ao amin'ny bara fikarohana ao amin'nyViewPuretranonkala milaza hoe ‘ Ampidiro ny URL YouTube na ny teny fikarohana . '
4. Farany, paompy hanadio ary jereo ny horonan-tsarinao nefa tsy misy doka.
Fanontaniana napetraka matetika (FAQs)
F1. Ara-dalàna ve ny fanakanana ny doka YouTube?
Tsy ara-dalàna ny fanakanana ny doka YouTube, ary ny mpampiasa dia afaka mampiasa fanitarana fanakanana doka mba tsy hahitana ireo doka eo anelanelan'ny horonantsary YouTube. Saingy, ny mpampiasa dia tsy manan-jo hanelingelina ny zon'ny mpanonta hanompo na hametra ny fidirana amin'ny atiny misy copyright amin'ny sehatra.
F2. Ahoana no fomba hanakanako ny doka YouTube amin'ny Chrome?
Mba hanakanana ny doka YouTube amin'ny tranokala Chrome, dia azonao atao ny mampiasa ny extension extension Ad izay antsoina hoe ‘ Adblock ho an'ny YouTube ’Na fanitarana hafa mety ho hitanao ao amin'ny magazay tranokala Chrome. Azonao atao koa ny mampiasa ny hack URL hanakanana ny doka YouTube.
Ahoana ny fomba fanakanana sy fanakanana tranokala ao amin'ny Google Chrome
Ahoana ny fomba hiantsoana horonan-tsary amin'ny telegram
Fomba 9 hanamboarana ny lesoka tsy nandefasana hafatra amin'ny Android
Ahoana ny fomba hampijanonana ny doka pop-up amin'ny Android
Manantena izahay fa ny mpitari-dalana ny Ahoana ny fomba fanakanana ny doka YouTube nanampy be, ary afaka nanala ireo doka nanelingelina tamin'ny horonantsary YouTube ianao. Raha tianao ny lahatsoratra, ampahafantaro anay ireo hevitra etsy ambany.
mandresy hatrany ny wifi 10
esory ny watermarks windows 10 2018
fomba fampandehanana dis windows 10
tsy misy fanavaozana ny windows windows 10
hatsiaka ny solosaina amin'ny fanombohana
Windows 7 dia tsy manana fikirakira ip mety
tsy afaka namoaka cache dver resolver